Heshiiska lagu gaaray Shirka Wadatashiga Qaran ee Muqdisho oo maanta madaxda Saxiixayaan | Somali Link Newspaper
Guriga Breaking News Heshiiska lagu gaaray Shirka Wadatashiga Qaran ee Muqdisho oo maanta madaxda Saxiixayaan
Heshiiska lagu gaaray Shirka Wadatashiga Qaran ee Muqdisho oo maanta madaxda Saxiixayaan
Khamiis May, 27, 2021 ( HOL ) – Iyadoo maanta lagu wado sida uu qorshuhu yahay in lasoo afjaro shirka wadatashiga Qaran ee madaxda Fedaraalka, kuwa dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir uga socday Teendhada Afisyooni ee magalada Muqdisho.
Waxaa haatan ka soconaayo Teendhada Afisyooni qabanqaabada Munaasabadda lagu saxiixayo heshiiska aay ka wada gaareen madaxda arrimaha doorashada dalka ka dhaceyso,iyagoona soo saari doona War-murtiyeed faahfaahsan.
Munaasabadda ayaa la sheegaya inay ka qeybgalayaan madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, xubno ka tirsan Golaha Midowga Musharaxiinta, Wakiilo ka socda Beesha Caalamka, iyo Ururada Bulshada rayidka ah.
Gabagabadii Munaasabadda maanta lagu saxiixayo heshiisyada lagu gaaray shirka Afisyooni ee aay wada gaareen madaxda dalka ayaa ahaa mid natiijadiisa aay si weyn indhaha ugu wada hayeen shacabka Soomaaliyeed iyo daneeyayaasha arrimaha Soomaaliya.
Article horeShil gaari oo ku dhaawacmay fanaan dhalinyaro ah iyo geerida qof shacab ah oo ka dhacay duleedka Garowe
Article soo socdaHoggaamiyaha Kacdoonka Hiiraan oo fariin adag u diray Raysal Wasaare Rooble